महोत्तरीबाट ३ लाख ३२ हजार नगदसहित ३ जना जुवाडे पक्राउ- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
महोत्तरीबाट ३ लाख ३२ हजार नगदसहित ३ जना जुवाडे पक्राउ
कार्तिक १५, २०७७ सुनिता बराल
महोत्तरी — महोत्तरीको मनरासिस्वा–६ स्थित बाँसघारीमा जुवा खेलिरहेका तीन जनालाई महोत्तरी प्रहरीले शनिबार ३ लाख ३२ हजार ९ सय ६० नगदसहित पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा मनरासिस्वा–७ का ४० वर्षीय विनोद कुमार साह, ४० वर्षीय सरोजकुमार साह र ३५ वर्षीय सन्तोषकुमार साह रहेका छन् ।
जुवा खेलेको सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बलवा र अस्थायी प्रहरी पोस्ट सरपल्लोबाट गएको संयुक्त टोलीले ९ थान कौडा र नगदसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए ।
नियन्त्रणमा रहेका तीनै जनालाई ‘जुवा मुद्दामा’ थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७७ १३:३३
हुइयाँ मोह : जिउँदै श्रद्धाञ्जली
यथार्थ नबुझी हल्लाकै भरमा कसैको मृत्युको समाचार फिँजाइदिन्छौँ । अरू काम ढिलो–ढिलो गरे पनि कसैलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नचाहिँ हामी निकै हतारिन्छौं ।
कार्तिक १५, २०७७ लीला लुइटेल
अङ्ग्रेजीको ‘क्राउड बिहेभियर’ पदावलीको प्रकृति र विशेषता केलाउँदा यो नेपालीमा प्रचलित ‘हुइयाँ’ शब्दसँग मेल खाने देखिन्छ । अहिलेको विद्युतीय सञ्चारको युगमा हुइयाँ आतङ्कको नेतृत्व त अनलाइन पत्रिका तथा युट्युबहरूले लिएको अनुभव सबैले गरेकै हुनुपर्छ ।
उच्चशिक्षित र चेतनशील भनिएका कतिपय व्यक्ति पनि आफ्नो सामान्य विवेकसम्म प्रयोग नगरी हुइयाँकै पछि दौडेको दृश्य हाम्रा लागि नौलो होइन । अहिले कोभिड भाइरसको दबदबाका कारण सिङ्गो मानवजाति आतङ्कित भएका बेला अनि २०७२ को भूकम्पका बेला पनि हाम्रो हुइयाँप्रेम सबैले अनुभव गरेकै हो ।
हुइयाँको यसखाले महामारीले नेपाली साहित्यलाई पनि बेलाबेला आतङ्कित बनाएको देखिन्छ । काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको व्यक्तिबारे पनि अन्टसन्ट एवं हावादारी कुरा लेखिदिने, महिलालाई पुरुष तथा पुरुषलाई महिला भनी सगर्व घोषणा गरिदिने, एउटा विधा तथा भाषाको पुस्तकलाई अर्कै विधा र भाषाको भनिदिएर लामै विश्लेषणका साथ पाण्डित्य छाँटिदिने, एउटा देशको नागरिकलाई अर्कै देशको नागरिक बनाइदिने आदि अनेक हुइयाँदारी सन्दर्भ त नेपाली साहित्यका पाठकलाई जानकारी नभएको होइन ।
हुइयाँको यसखाले आतङ्कले कतिपय साहित्यकारलाई जीवितै श्रद्धाञ्जली दिन गरेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिसँग पनि हामी कोही अपरिचित छैनौँ । कविवर माधव घिमिरेले यस संसारबाट बिदा लिएको २०७७ भदौ २ गते हो तर हामीमध्ये अधिकांश साहित्यप्रेमीले माधव घिमिरेलाई २०७४ जेठ १४ मै श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिसकेको यथार्थ सबैको सम्झनामा ताजै हुनुपर्छ । अझ पछि परिएला कि भन्ने डरले उनलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न युद्धस्तरको प्रतिस्पर्धा नै चलेको हो त्यसबेला । अरू त अरू भइगए, मुलुककै मुख्य जिम्मेवार पदमा आसीन गृहमन्त्रीले समेत हुइयाँकै भरमा हतारिएर श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका बेला हाम्रो हुइयाँ मोह नराम्रैसँग छरपस्ट भएकै हो ।
गृहमन्त्रीको यस कार्यलाई उनका भक्तहरूले साहित्यकारप्रति देखाएको आस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न पनि सक्लान्, तर सिङ्गो मुलुकको गृहमन्त्रीको पदमा आसीन एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले हुइयाँकै भरमा यति हतारिएर समवेदना प्रकट गर्नुअघि वस्तुस्थितिबारे यथार्थ जानकारी लिनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ? यदि उनी आफूलाई साहित्यकारप्रति आस्था राख्ने संवेदनशील व्यक्तिका रूपमा चिनाउन लालसा राख्ने व्यक्ति थिए भने उनी स्वयं माधव घिमिरेका घरमा पुगेर वस्तुस्थितिको जानकारी लिनु र सम्बद्ध परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्नु उनको कर्तव्य थियो । त्यति गर्न नसके पनि परिस्थिति बुझ्न कसैलाई पठाउन पनि सक्थे । यति गर्न उनी व्यक्तिकै स्तरमा त सक्षम थिए भने एउटा जिम्मेवार पदमा आसीन अनि सिङ्गो सरकारी साधन एवं सुविधा जुनसुकै बेला जस्तोसुकै अवस्थामा परिचालन गर्न सक्ने हैसियतमा थिए उनी त्यतिबेला । यति पनि भएन रे लौ, एक कल फोन गरेर हल्लाको सत्यतथ्य बुझ्न त सक्थे नि ।
यसबाट हाम्रो साथमा राज्य छ भन्ने सन्देश सम्पूर्ण साहित्यकारमा प्रवाहित हुन सक्थ्यो । यसले व्यक्तिगत रूपमा उनी लोकप्रिय हुनुका साथै उनको प्रतिष्ठामा पनि बढोत्तरी हुन्थ्यो । यहाँ उनका भक्तहरूको प्रश्न हुन सक्छ— कुनै व्यक्तिको निधनमा मन्त्री जानु सम्भव हुन्छ त ? यस प्रश्नको उत्तर मसँगचाहिँ यस्तो छ— माधव घिमिरे एउटा व्यक्ति मात्र नभई राष्ट्रबाटै सम्मान र भत्ता प्राप्त गरेका साहित्यकार हुन् । त्यसैले राष्ट्रको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले उनीप्रति गर्नुपर्ने औपचारिक कर्तव्य पनि थियो त्यो । देशको गृहमन्त्रीजस्तो पदमा आसीन मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति त यसरी हुइयाँको पछि दौडन्छन् भने अरूको त के कुरा गर्नु र खै ?
यसरी जिउँदै श्रद्धाञ्जली पाएपछि माधव घिमिरेले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए :
अचम्म भो, अचम्म भो, अचम्म भो
यही जुनीमा अर्को जुनी पाएँ
लाखलाख नेपालीको माया पाएँ ।
जिउँदै श्रद्धाञ्जली पाउने व्यक्तिहरूमा माधवप्रसाद घिमिरे मात्र एक्ला साहित्यकार होइनन् । जनकविकेशरी, गायक धर्मराज थापा तथा साहित्यकार भीमनिधि तिवारीजस्ता साहित्यकारले पनि जीवितै छँदा श्रद्धाञ्जली पाएका रहेछन् ।
२०११ सालतिर प्रशासनिक कामको जिम्मा लिएर धर्मराज थापा मुस्ताङको सेरोफेरोमा गएका रहेछन् । लोकगीतको सङ्कलन तथा अनुसन्धान गर्ने अभीष्टबाट प्रेरित भई त्यतिबेला उनको बसाइ त्यता अलि लामै भएछ । यता काठमाडौँमा ‘समाज’ नामक पत्रिकाले उनको निधन भएको समाचार छापेर श्रद्धाञ्जली दिन भ्याइसकेछ । पछि नरप्रताप थापा कामविशेषले पोखरा गएका बेला त्यहाँ धर्मराज थापालाई देखेर जिल खाएछन् । उनले धर्मराज थापालाई काठमाडौँमा उनको मृत्यु भइसकेको भनेर पत्रिकामा समाचार छापिएको कुरा बताएछन् । त्यसको केही समयपछि धर्मराज थापा काठमाडौँ आएर भूगोलपार्कमा एउटा कार्यक्रम गरी आफू जिउँदै रहेको जानकारी दिएछन् । गोविन्द लोहनीको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा धर्मराज थापाले छाती ठोक्दै ‘म मसानबाट ब्युँझेर आएको एउटा मुर्कट्टा हुँ’ भनेर भाषण गरेका थिए रे । धर्मराज थापा स्वयंले एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा यस घटनाको बेलिविस्तार लगाएको यस पङ्क्तिकार स्वयंले सुनेको हो ।
२०२१ साल जेठ ३१ गते साहित्यकार बालकृष्ण समले अर्का साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको देहान्त भएको हल्ला सुनेछन् । अझ एक जनाले त उनलाई ‘भीमनिधिको शव पशुपति लगेको मेरै आँखाले देखेको हजुर’ भनेर सुनाइदिएछ । यो सुनेर अत्यन्त दुःखी भएका सम भीमनिधिको परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्न तुरुन्तै उनको घरमा पुगेछन् । त्यहाँ पुग्दा चिरिच्याँट्ट परेर बसेकी भीमनिधिकी छोरी बेन्जुले प्रसन्नतापूर्वक आफूलाई स्वागत गरेको देखेर सम तिल्मिलाएछन् र ठाडै खुट्टा घरबाहिरबाटै फर्किन खोजेछन् । सम र बेन्जुको वार्तालाप सुनेर ‘को आएछ’ भनी बुझ्न भीमनिधि स्वयं बाहिर निस्कँदा समलाई देखेछन् । भीमनिधिले बोलाएर भित्र लगेपछि पनि कति बेरसम्म त सम बोल्नै सकेनछन् । निकै बेरपछि सानो स्वरमा समले ‘यो टोलमा भीमनिधि तिवारी भन्ने अर्को मान्छे पनि छ’ भनेर सोधेछन् र अन्त्यमा दुःखी हुँदै आफू त्यहाँ आएको कारण बताएछन् । यस यथार्थ घटनाका आधारमा सम, तिवारी र बेन्जुका बीच छोटोमिठो संवादको आयोजना गरी साहित्यकार बेन्जु शर्माले ‘सत्य घटना’ शीर्षकमा दुई दृश्यको एउटा नाटक पनि लेखेकी छन्, उक्त नाटक २०२१ साल भदौको रूपरेखा (वर्ष ५ पूर्णाङ्क ५३/७) पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
जीवितै छँदा मृत्युको हल्ला गरिएका अर्का साहित्यकार लव गाउँले पनि हुन् । ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ कविताका सर्जक भूपि शेरचनलाई २०३९ सालतिर लव गाउँलेले संसार छोडेको कुरा कसैले सुनाइदिएछ र उनी सोधपुछ गर्न थालेछन् । उक्त हल्ला सुनेर लव गाउँलेका मित्र गोविन्द गिरी प्रेरणा सत्यतथ्य बुझ्न तथा समवेदनाका लागि फोटो खोज्न भनी लव गाउँलेको अफिस पुगेछन् र त्यहाँ लव गाउँलेलाई देखेर जिल खाएछन् । लव गाउँलेको मृत्युको हल्ला यो एकपटक मात्र नभएर अर्कोपटक पनि चलेको रहेछ । २०४३ सालतिर उपचारार्थ मनमोहन अस्पतालमा रहेका बेला पनि लव गाउँलेको मृत्यु भएको हल्ला चलेछ । त्यतिबेला पनि उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न कतिपय साहित्यकारले फूलमालासमेत किनिसकेको जानकारी पाइन्छ ।
मिति ठ्याक्कै सम्झना भएन, २०४०–४१ सालतिर हुनुपर्छ, साहित्यकार सीता पाण्डे झापाबाट काठमाडौँ आउँदा सवारी दुर्घटनामा परेकी थिइन् एकपटक । त्यतिबेला उनको निधनको हल्ला नाटककार एवं कलाकार कुबेर गर्तौलाले यस पङ्क्तिकारलाई बडो दुःखपूर्वक सुनाएका थिए । यस्तै हल्ला सुनेर राजेन्द्र शलभ शोकसभाका लागि सरसल्लाह गर्न गोविन्द गिरी प्रेरणाको घरमा पुगेका थिए । पछि यो यथार्थ नभई हल्ला मात्र भएको थाहा पाएर दुवै जना तैँ चुप मै चुप भएर बसेका थिए । साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली उपचारार्थ अस्पतालमा भर्ना भएका बेला कसैले फोन गरेर म स्वयंलाई पनि मृत्युको खबर दिएको थियो । उनको घरपरिवारसँग नजिकको सम्बन्ध भएका कारण तुरुन्त फोन गरेर बुझ्दा उक्त खबर झूटो साबित भई त्यतिखेर हामीले सन्तोषको सास फेरेका थियौँ । यसैगरी अम्बर गुरुङ अस्पतालमा हुँदा मृत्युको हल्ला फैलिएर कतिपयले श्रद्धाञ्जली दिएको पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ ।
हामी नेपालीको हुइयाँ प्रेम दर्साउन माथिका केही उदाहरण पर्याप्त छन् । अरू त अरू कसैको मृत्युको समाचार पनि हामी यथार्थ नबुझी हल्लाकै भरमा हल्ला फिँजाइदिन्छौँ अनि अरू काम अलि ढिलोढिलो गरे पनि कसैलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नचाहिँ हामी पछि परिएला कि भन्ने डरले असाध्यै छिटो गर्छौँ । स्रोत र सामग्रीको अभावका कारण समाजमा कहिलेकाहीँ यस्ता भ्रमहरू फैलिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएला तर हामी अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा छौँ । समाजमा फैलिएका यस्ता भ्रमहरू यथार्थ हुन् कि होइनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नका लागि हामीसँग पर्याप्त सामग्रीको सुलभता छ । यस्ता सामग्री अहिले प्रत्येक व्यक्तिले सहजतापूर्वक हत्केलामा खेलाउने मौका पाएका छन् । आफूलाई एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा बाँचेकोे मान्छे भनेर गर्व गर्ने होड पनि हामीमा पर्याप्त छ । यसरी आफ्नै पहुँच र नियन्त्रणमा रहेको यति सर्वसुलभ सामग्री प्रयोग गरेर आफूलाई अद्यावधिक राख्न सक्ने स्थितिमा हुँदासमेत विवेकपूर्ण ढङ्गले यसको प्रयोग नगरी हुइयाँको पछि लाग्न मन पराउने यस्तो विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा रहेका हामीलाई आउने पुस्ताले दिने विशेषण कस्तो होला कुन्नि ?
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७७ १३:१४